osTicket: Kachasị mma usoro iji nweta usoro tiketi | Site na Linux
osTicket: Kachasị Open Isi nweta usoro tiketi
Arụrụ m ọrụ na ụlọ ọrụ buru ibu buru ibu na mba m Venezuela, na ha abụọ, ngalaba nkwado nwere ọtụtụ nsogbu mgbe ha na-achịkwa nsogbu ndị ọrụ aka nke ndị ọrụ, ejirila teknụzụ dị iche iche dozie ha, mana karịa ihe niile na mmalite nke a Open usoro tiketi usoro.
Agbanyeghị na abụghị m ọkachamara n'ọhịa nkwado, oge ụfọdụ m ga-etinye aka dị ukwuu na mpaghara ahụ n'otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, n'otu ụzọ ahụ, enwere m ohere ịbụ onye ọrụ GLPI ma họrọ itinye ya Osicket, nke bu nkem bu nke kachasi nma Open usoro tiketi usoro.
Iji họrọ iji mejuputa osTicket N'ime otu ụlọ ọrụ dị na ebe nchekwa nchekwa, m ga-enyocha ngwaọrụ dị iche iche nke ndị na-esote: RT (Arịrịọ Tracker), OTRS: Mepee Arịrịọ tiketi, GLPI (Gestionnaire Libre nke Parc Informático) y osTicket.
Anọ m na ndị nke ikpeazụ, ọkachasị n'ihi na ọ mere ka m nwee ike iwepụ tiketi dị ka ngalaba na-ahụ maka idozi ya (Na otu a anyị na-ejikwa nkwado nke mpaghara niile, ọ bụghị naanị mpaghara teknụzụ). N'otu ụzọ ahụ, emere m ka ọ ghara inwe mmeghari ọzọ, ebe ọ bụ na naanị onye ọrụ nwere ike ịnara tiketi ọ bụla.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na osTicket Ọ nwere ọrụ dị mkpa iji jikwaa ụdị nkwado ọ bụla. Na mgbakwunye na ịbụ ihe na-emeghe, ọ nwere nnukwu obodo na-enye ya ohere ịnye ọtụtụ atụmatụ dị mma karịa ndị na-asọmpi ya.
1 Gini bu usoro eji emeghe akwukwo?
2 Kedu ihe bụ osTicket?
3 OsTicket atụmatụ
4 Etu esi etinye osTicket
4.1 Ihe choro
Gini bu usoro eji emeghe akwukwo?
na Open usoro tiketi usoro ma ọ bụ ihe a na-akpọ n'asụsụ Spanish Mepee Ebe usoro tiketi, Ha bụ ngwa efu na-enye anyị ohere ijikwa ihe omume na arịrịọ maka ọrụ na usoro ahaziri ahazi.
A nabatara ihe na arịrịọ dabere na tiketi ndị ọrụ zitere, nke echekwara ma nyefee ya n'ụzọ dịgasị iche iche na onye ọrụ na-ahụ maka ijikwa ya. A na-eji ngwaọrụ ndị a n'ọtụtụ ebe na Calllọ Ọrụ oku, Ngalaba IT, Data Center, lemlọ ọrụ Telemarketing, n'etiti ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ osTicket?
Ọ bụ ngwa weebụ nke na-enye gị ohere ijikwa n'ụzọ doro anya, dị mfe ma dịkwa mfe, ihe omume ndị ọrụ mere site na email, ụdị weebụ yana oku ekwentị.
osTicket ena-ewere ọtụtụ ndị kasị mma Open usoro tiketi usoro taa, ebe ọ nwere ọtụtụ atụmatụ na ngwaọrụ karịa ọtụtụ usoro tiketi na ahịa.
N'otu ụzọ ahụ, ntinye osTicket dị mfe yana ojiji ya pụtara ìhè karịa ngwọta ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọ nwere API dị ike nke na-enye ohere ijikọ akụrụngwa na ngwọta ndị ọzọ.
Nchịkwa iwu azụmaahịa site na SLA
Ọ na-enye gị ohere ikezi tiketi dị ka ngalaba nke ọ dabara na ya iji dozie ya.
Ọ na - enyere aka ịkọwapụta arụmọrụ dịka ụdị tiketi ahụ, na-eme nzaghachi akpaka ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ohere nke itinye ọtụtụ faịlụ (foto, onyonyo, ọdịyo na vidiyo) na arịrịọ dị iche iche.
Nwere ike idetu na tiketi banyere omume niile emere na isiokwu a na-ekwu.
Weghara tiketi site email, weebụ, ekwentị, faksị na site na API.
Omenala ubi na tiketi, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịrịọ ozi ziri ezi.
Ederede bara ọgaranya HTML
Nsonye Enyemaka Isiokwu iji dozie ihe ndị mere na-enweghị mkpa imeghe tiketi, ọ na-enyekwa ohere ịmepụta otu edemede na tiketi ahụ.
Gbochie ọtụtụ ndị na-emekọ ọrụ na-aza tiketi n'otu oge ahụ.
Nyefee tiketi n'etiti ngalaba ma ọ bụ nyefee ha na ndị otu iji hụ na ndị ọrụ aka edozi ha.
A na-ede akwụkwọ niile na ntanetị. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịbanye na iji email na ID ID, ọ bụ ezie na enweghị ndebanye aha ma ọ bụ onye ọrụ achọrọ iji nyefee tiketi.
Comprehensive akụkọ na-enye a ghọta na arụmọrụ na arụmọrụ nke nkwado otu.
Ọtụtụ ndị ọzọ.
Etu esi etinye osTicket
Oge 2 nke m rụnyere osTicket agbasoro m usoro ọrụ gọọmentị nke dị na nchekwa ya, nke m na-egosi n'okpuru, ọ bụghị n'ebughị ụzọ kpọtụrụ Iwu chọrọ na ụfọdụ ndọtị ndị akwadoro iji wụnye.
Http server na-agba ọsọ, ọkacha mma Apache
Versiondị PHP 5.4 ma ọ bụ karịa, 5.6 kwadoro
MySQL ndọtị maka PHP
MySQL mbipute data 5.0 ma ọ bụ karịa
gd, gettext, imap, json, mbstring, na xml ndọtị maka PHP
APC modul nyeere ma hazie maka PHP
Zọ kachasị mfe iji wụnye osTicket bụ iji mejupụta ebe nchekwa ọha, wee mepụta folda na sava weebụ anyị ma mechaa tinye ngwa ahụ. Dị ka ọ na-egosi na ndị na-esonụ:
Nwere ike ịnweta oghere osticket gị na sava iji tinye ma hazie ngwa ahụ, ka achọrọ. I nwekwara ike inweta mmelite ohuru ma tinye ya (site na folda nke ị na-emechi ebe nchekwa ahụ), site na ịme iwu ndị a.
Ngwa ahụ dịkwa maka ntinye na ngwá ọrụ a ma ama Ọ dị nro.
Ana m akwado ngwa a ma ọ bụrụ na ị nwere mkpa ijikwa ihe omume n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ezie ngwá ọrụ a ga-enyere gị aka ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » osTicket: Kachasị Open Isi nweta usoro tiketi
Luis obodo dijo
Think chere na ọ bụ ezigbo ihe ọzọ yana otu uru ya dị ka sistemu na-akwụ ụgwọ AR?
Zaghachi Luis mepere emepe
Ọ bụ ezigbo ihe ọzọ na BMC Remedy Help Desk, ọ nwere ọtụtụ atụmatụ ndị Ngwọta AR na-enye maka ebumnuche ndị ahụ, mana karịa ihe niile ọ bụ n'efu.
Edemede dị ezigbo mma yana ezigbo ndụmọdụ
Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị
Ndewo ngwere, lee ezigbo edemede!
Enwere m ajụjụ; Kedu ngwa nwere ike iji osTicket zuo ezu iji buru CMDB dịka ahụmịhe gị?
Enweghị m mkpa iji mejuputa CMDB, n'ọnọdụ m ọ bụrụ na m ga-achọ ya, m ga-ewere ọsọ ọsọ ma jiri OTRS https://www.otrs.com/ nke na-etinye CMDB na ndabara ... Ugbu a, ọ bụrụ na ijikọ ya na osticket, m ga-eji api ya dị ike iji jikọta na Itop, nke bụ CMDB mepere emepe ma dị ike, Itop amaghị m ya nke ọma (ule nnwale abụọ ), ma ụfọdụ ndị ọrụ ibe m ejirila ya rụọ ọrụ ma kwuo n'ụzọ dị ebube banyere ya.
Ugbu a, m na-arụ ọrụ na Itop m kwadoro ya n'amaghị ama ebe ọ bụ na ọ zuru oke ma ọ dịkwa oke ike na n'ihi nsogbu kwa ụbọchị, anyị ejighị ngwa ọrụ zuru oke mana ọ na-enye gị ọtụtụ nhọrọ oge iji mejuputa CMDB siri ike.
Mụ na enyi m nwere ajụjụ, ị nwere akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ vidiyo ọ bụla ma ọ bụ ihe m nwere ike iji maka nhazi site na 0 ruo 100 na itop
Zaghachi David Gruzzi
osticket choro igbanwe koodu ole na ole mana o choro ka ha mejuputa CMDB, n’agbanyeghi n’iburu n’uche na mba Latin adighi agbaso usoro a nke oma, i gha eme ya ma o kariri OTRS ... ihe obula m huru gha agha itinye ihe oma nke a na Disemba 2020 .. ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ edemede dị ka nke na-edoghị anya dị ka nke a ebe ha na-ekwu naanị na ọ dị mma na ọ dị mfe mana enweghị oke nhazi .. na-enweghị nke a, ọ bụghị ihe ịtụnanya dịka ọ dị n'ezie
Ọfọn, ajụjụ, enwere ngwa mgbakwunye ma ọ bụ koodu iji mejuputa, yabụ na mgbe ị na-ekenye onye na-akwado 1 tiketi ahụ, ọ na-ezigara onye wepụtara tiketi ahụ ozi email na-akpaghị aka, yana akara tiketi na aha onye ga-aga ya . Cheers ..
Ntụle dị mma, ee sir, daalụ maka nkwanye gị.
Edemede dị mma, nkwanye ọ bụla iji wepụta tiketi iji faịlụ CSV rụọ ọrụ?
Ka chifoo! Kedu ka m ga-esi nweta ọkwa ahụ na mail naanị na ngalaba na-ahụ maka idozi tiketi na ọ bụghị ndị nnọchi anya niile
Zaghachi Alejandra González
Diego Villasis placeholder oyiyi dijo
Ezigbo edemede na nkwanye, ị nwere ike ịkwado OSTicket maka nkwupụta ndị na-esiteghị na IT, mana site na azụmaahịa, dịka nkwupụta ngwaahịa mma, akwụkwọ ọnụahịa, wdg.
Enwere ike ịhazigharị ihuenyo enwere ya na mpaghara nke ya?
You nwere ngwa iji rụọ ọrụ site na smartphones gam akporo / IOS?
Ndo maka ọtụtụ ihe n’otu oge, enwere m olile anya na ị ga-enweta azịza gị ziri ezi
Zaghachi Diego Villasis
GLPI zuru oke, na-enye gị ohere izipu ozi ịntanetị, ma LDAP jikọtara gị
Zaghachi ka mvalenzuela
Osticket bụ ezigbo nhọrọ maka nkwado ndị ahịa, ejiri m ya ogologo oge na ụlọ ọrụ ebe m rụrụ ọrụ. Ọ bụ ya mere m ji nwee ya na ndepụta nke sistemụ tiketi eji emepe emepe nke kachasị iji. https://helpdeskpymes.com/herramientas-de-ticketing/
Enyi kedu ka ị mere, mgbe ahụ na mmemme a ị nwekwara ike ịmepụta usoro ngwakọ ngwaahịa ??? Kedụ ka GLPI si eme ya ???
Zaghachi Juan Carlos Herrera Blandon
Ezi ehihie, ezigbo ọdịnaya, naanị m nwere otu ajụjụ gbasara sistemụ arụmọrụ nke ị kwadoro ịwụnye OSticket
Zaghachi Nohel Guardiola
ndewo, enwere ọkachamara osTicket ebe a ma ọ bụ onye ị kwadoro?
Zaghachi alejandro diaz
INGLER KWESULRANT dijo
Olá Prezado, abụrụ m onye ndụmọdụ, Engler, ana m arụ ọrụ na ire ụlọ ụlọ lazer, anyị nwere BARUERI, OSASCO, CARAPICUIBA, GUARULHOS NA SHO BERNARDO DO CAMPO, Ezigbo ọnụ ahịa na ọnọdụ (Bido na 209,00) Aceita FGTS, Venha conhecer o mma (ime ụlọ 01 na 02) n'etiti kọntaktị zap 11 98495-1050, ịmara nkọwa na ileta ma ọ bụ chọọ mma, (Engler Consultant)
Zaghachi na CONSULTORA ENGLER
Etu esi eji iTunes na Linux